Iinqununu zibulala amaBhakteria kwaye zineminye inzuzo
Iinqununu zibulala iiBatteria
Ngethemba lokufumana iindlela zokulawula izifo ezinokutya, abaphandi baye bafumanisa ukuba iziqholo zibulala ibhaktheriya . Ucwaningo oluninzi luye lwabonisa ukuba iziqholo eziqhelekileyo, njengegalikhi, i-clove, ne-sinamon, zinokusebenza ngokuthe ngqo kwimimandla ethile ye-bacteria ye- E. coli .
Kwisifundo seYunivesithi yaseKansas State, izazinzulu ziye zavavanya ngaphezu kwezi-23 iziqholo kwiimeko ezintathu: i-laboratory medium, inyama ye-hamburger engafunkiweyo kunye ne-salami engadliwayo.
Iziphumo zokuqala zibonise ukuba i-clove inefuthe eliphambili elikhuselekileyo kwi- E. coli kwi-hamburger ngelixa i-garlic inefuthe elikhuselekileyo kwi-laboratory.
Kodwa kuthekani ngongcamango? Iingcali zenzululwazi zavuma ukuba ukufumana ukuxutyaniswa okufanelekileyo phakathi kokutya kunye neemali eziyimfuneko zokuvimbela izifo eziphilayo ziyingxaki. Iimali zeziqholo ezisetyenzisiweyo zivela ukusuka kwipesenti enye ukuya kwipesenti eziphezulu. Abaphandi banethemba lokuqhubela phambili ukutyikitya le nxaxheba kunye mhlawumbi nokwenza iziphakamiso zamanqanaba omnxeba kubenzi kunye nabathengi.
Iingcali zenzululwazi ziye zaxwayisa ukuba ukusetyenziswa kweziqholo akungena endaweni yokuphatha kakuhle ukutya. Ngoxa izixhobo ezisetyenzisiweyo zakwazi ukunciphisa kakhulu iimali ze- E. coli kwimveliso yenyama, azizange ziphelise i-pathogen ngokupheleleyo, ngoko ke kufuneka ukuba ziphephe iindlela ezifanelekileyo zokupheka. Ukutya kufuneka kuphekwe kuma-degrees angama-160 amaFahrenheit uze ufike i juisi.
Izixhobo kunye nezinye izinto ezidibeneyo kunye nomzimba ongcolileyo kufuneka zihlanjwe kakuhle, mhlawumbi ngeesepha, amanzi ashushu kunye nesisombululo se-bleach.
ICinnamon ibulala iBatteria
I-Cinnamon yinto ekhangayo kwaye ibonakale ingcolileyo. Ngubani oza kucinga ukuba ingaba yingozi? Abaphandi eYunivesithi yaseKansas State baye bafumanisa ukuba i-sinamoni ibulala i- Escherichia coli i- O157: H7 ibhaktheriya .
Kwizifundo, iisampuli zamapulisi zepulazi zazingcoliswa malunga nesigidi esisodwa E. i-coli i- O157: i-H7 ibhaktheriya. Kuthekwa i-isipuni ye-sinamoni kwaye i-concoction yasala ukuba imele iintsuku ezintathu. Xa abaphandi bavavanya iisampuli zamanzi, kwafumanisa ukuba i-99.5 ekhulwini yebhaktheriya yachithwa. Kwakhona kwafumanisa ukuba ukuba izilondolozo eziqhelekileyo ezifana ne-sodium benzoate okanye i-potassium sorbate zongezwa kumxube, amanqanaba amabhaktheriya aseleyo ayengabonakali.
Abaphandi bakholelwa ukuba ezi zifundo zibonisa ukuba i-sinamon ingasetyenziswa ngokufanelekileyo ukulawula iibhaktheriya kumajusi angenakucatshulwa kwaye mhlawumbi olunye usuku lugcine indawo yokulondolozwa ekudleni. Ba nethemba lokuba i-cinnamon inokusebenza ngokufanelekileyo ekulawuleni ezinye izifo ezibangelwa ukugula ezifana neSalmonella kunye neCampylobacter .
Izifundo zangaphambili zibonise ukuba i-sinamon inokulawula kwakhona ii-microbes kwenyama. Noko ke, kusebenza kakhulu, nangona kunjalo, ngokuchasene nee-pathogens kwisiselo. Ngamayeza, ii-pathogens azikwazi ukuxutywa ngamafutha (njengoko zisemgangathweni) kwaye ngoko kulula ukutshabalalisa. Okwangoku, indlela efanelekileyo yokukhusela isifo se- E. coli kuthatha amanyathelo okuthintela. Oku kubandakanya ukuphepha iimbusi kunye nobisi obungapheliyo, ukupheka inyama ekhulayo ukushisa kwangaphakathi kwama-degree degrees Fahrenheit, kwaye uhlamba izandla emva kokuphatha inyama eluhlaza.
Iziqholo nezinye iiNzuzo zezeMpilo
Ukongeza ezinye iziqholo kwisidlo sakho kunokunokuba neenzuzo ezintle zokuxhamla. Iziqholo ezifana ne-rosemary, i-oregano, i-cinamon, i-turmeric, ipolisi emnyama, i-cloves, i-powder powder, kunye nokwanda kwe-anti-acidist in blood kunye nokunciphisa impendulo ye-insulin. Ukongezelela, abaphandi be-Penn State bafumanisa ukuba ukongeza ezi ntlobo zonongono ekudleni amafutha amaninzi kunciphisa impendulo ye-triglyceride ngama-30 ekhulwini. Amanqanaba aphezulu e-triglyceride anxulumene nesifo senhliziyo.
Kulo cwaningo, abaphandi bafanisa nemiphumo yokutya ukutya okunamafutha aphezulu kunye neengqonge ezongeziweyo kwizinto ezinamafutha aphezulu ngaphandle kweziqholo. Iqela eladla ukutya okucocekileyo lalinomsila ongaphantsi we-insulin kunye ne-triglyceride ekuphenduleni ukutya kwabo. Ngokumalunga neenzuzo ezifanelekileyo zezempilo zokudla ukutya kunye neziqholo, abathathi-nxaxheba baxela iingxaki ezinqabileyo zesisu.
Abaphandi baphikisana ukuba izixhobo ezinokuxhatshazwa kwe-antioxidant ezifana nezo zifundo zingasetyenziselwa ukunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative. Uxinzelelo lwe-oxidative ludibene nokuphuhliswa kwezifo ezingapheliyo ezifana nesifo samathambo, isifo senhliziyo kunye nesifo sikashukela.
Ngolwazi olungakumbi, bonani:
I-Cinnamon Is Lethal Isapon Against uElili O157: H7
I-Antioxidant Spices Iyanciphisa Imiphumo engebiyo yeSidlo seFat-High
Iinkcukacha zezilwanyana ezimnandi
AbaBawo abalungileyo nabakhulu kunazo zonke kwiBukumkani bezilwanyana
Izifo Ongazenzayo Kwi-Pet Your
Ukuzaliswa kweBhakterial kunye neFissionary Fission
Iraq | Iinkcukacha kunye neMbali
Ungayifaka I-Table Yakho yeTable Table kwiTable?
Imbali emfutshane yoLungiso lweePlastics
Iikhompyutheni ze-Smartphone zeKamva
I-Ethics & Morality In Practice Taoist
Izakhono zoFundo kubaQala
UMarjorie Lee Browne: Umfazi weMathematician
Ziziphi izinto zokutya ezidlulileyo kwiPasika?
Ionic vs Covalent Bonds - Qonda ukuhluka
Iingoma zeKrismesi Ngokuzalwa kukaYesu
I-Point Loma Nazarene University
IYunivesithi yase-Illinois yaseCalbondale GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Inkcazo echanekileyo kwiKhemistry
Mayelana neGlosari yebhola - Inkqubela phambili
Ikusasa loPhando lweNdawo
Ngubani o wa yiSophocles
Iphutha elingenasiphelo okanye ukungaqiniseki ngokungaqiniseki Inkcazo
Iinkolelo Nezenzo zeCawa zeAnglican neEpiscopal